लकडाउन कि राणाशाही ?
डा. गाेपाल ठाकुर शुक्रबार, वैशाख ५, २०७७ मा प्रकाशित
कलंकीमा औषट धि किनेर फर्केकाहरूलाई लाठी बर्साउँदै प्रहरी। तस्बिर: हेल्थपाटी डटकमबाट
विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको कारण गत चैत्र ११ देखि हामी नेपालका जनता पनि लॉकडाउनमा छौं । हाम्रो जीवन कठिन भए पनि हामी हाम्रै लागि सम्झेर यसको पालना गर्दैछौं । तर सरकारको सुरक्षा, आपूर्ति, कोरोना जाँच, क्वा रन्टिन, राहत र कम्युनिष्ट शब्दावली अनुसार सर्वहाराहरूको व्यवस्थापन राणाशाहीभन्दा पनि दुरुह देखिएको छ ।
सुरक्षा व्यवस्थापनको कुरो गर्दा म मेरा मीत हजुरबा जिमदार ठाकुरलाई अहिले झलझली सम्झिरहेको छु । उहाँ राणाशाहीमा पुलिस हुनुहुन्थ्यो । उहाँका अनुसार तिनताक अहिलेको जस्तो प्रहरीको लागि छुट्टै वर्दी तथा हतियारको व्यवस्था थिएन रे! टाउकोमा रातो फेंटा हुन्थ्यो । त्यसलाई हाम्रो गाउँघरमा ‘लाल मुरेठा’ भनिन्थ्यो । मेरा मीत हजुरबाका अनुसार ‘लाल मुरेठा’ देख्नेत बित्तिकै आम जनता थर्कमान हुन्थे । थर्कमान हुनुको कारण थियो ती लाल मुरेठाधारीहरूले जसलाई जुन पनि काम अर्होउन सक्थे र आनाकानी गरेको खण्डमा रामधुलाई गर्थे । राणाशाही गएको सत्तरी वर्ष पार भएको छ । यस बीचमा राजा महेन्द्रको पंचायती तानाशाही पनि बेहोरियो, ज्ञानेन्द्रशाही पनि बेहोरियो । ती व्यवस्थाहरूको विरोधमा हुने आन्दोलनहरूमा म स्वयं सहभागी हुँदै आएको छु । तिनताक बेला-बेलामा लगाइएको कर्फ्यु मैले स्वयं बेहोरेको छु । कम्तीमा सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर निस्कनेहरूलाई पहिला सोध्नेि काम अवश्य गर्थे ।
अहिले पनि लॉकडाउनलाई भारतमा जनता कर्फ्यु पनि भनिएको छ । तर यो कुनै राजनीतिक व्यवस्थाको विरोधमा हुने आन्दोलनलाई रोक्नक लगाइएको होइन । रोगसँग लड्नको लागि लगाइएको हो । तर वर्तमान सरकारका सुरक्षाकर्मीहरूको पारा राणाकालीन सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि बिर्साउने खालको पटक पटक देखिन आएको छ । बिना सोधपुछ सीधै लाठीचार्ज । एक-दुई ठाउँ पनि होइन । जताततै ! हुँदाहुँदा अस्पतालमै जचाउन जाने रोगीहरूमाथि लाठीचार्ज गरेका छन् सुरक्षाकर्मीहरूले सिरहामा ।
हिजै चिकित्सा अध्यार्थी डा. रामकुमार यादवले मलाई फोन गरे । उनी घर बसेको बेलामा कुनै छिमेकी चिकित्सकीय सल्लाहका लागि उनीकहाँ पुगेछन् । उनी सामान्य सोधपुछ के गर्न लागेका थिए प्रहरीको लाठी बर्सिन थाल्यो । त्यति मात्रै होइन, उनको बुवालाई समेत गिरफ्तार गरेर अहिलेसम्म थुनामा राखेको छ प्रहरीले । त्यही पटेर्वामा चिया पसल किन खोलेको भनेर चिया पसलेलाई पनि प्रहरीले राम्रै मरम्मत गरेको घटना पनि समाचार बनेको पाइयो । हिजै राति महाराजगंज शिक्षण अस्पतालकै चिकित्सकहरूमाथि लाठीचार्ज भएको घटना संचार माध्यमहरूमा एका बिहानै पढ्नु-सुन्नु पर्योा भने धरानमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि हातपात भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन् । सामाजिक संजालहरूमा टाउकोमा बोरा राखेर पैदलै आफ्ना गन्तव्यतिर लागेकाहरूमाथि निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज भएका तस्वीरहरूको त कुनै गिन्ती नै छैन । आखिर के हो यो ? लॉकडाउन उल्लंघन गर्नेहरू नै कोही छन् भने तिनलाई क्वाथरन्टिन कि लाठीचार्ज ?
आपूर्तिको कुरो पनि त्यस्तै छ । पहिलो सहज छैन । दोस्रो कालाबजारी पनि त्यस्तै छ । यस बारे यसै स्तम्भमा मैले पहिले पनि लेखिसकेको छु । कोरोना जाँचका विवरणहरू पनि अपत्यारिला देखिन्छन् । र्‍यापिड डाइग्नोकष्टिक टेष्ट (आरडिटी) मा पोजिटिभ र पोलिमरेज चेन रियाक्शन (पिसिआर) मा नेगेटिभ देखिँदा पिसिआर नै मान्य भए पछि आरडिटीमा समय र लगानी सरकारले किन खर्चिरहेको छ बुझ्न गाह्रो भएको छ । त्यस्तो भए पनि जति परिमाणमा परीक्षण हुनु पर्ने हो, त्यो पुगेको देखिँदैन । साधन-श्रोत नै नपुगेको अवस्थामा टेस्टिङ मात्रै कति लम्बिने हो थाहा छैन ।
क्वाटरन्टिनको हालत पनि सन्तोषजनक देखिन्न । होम क्वोरन्टिन र सेल्फ क्वा्रन्टिनको कुनै अनुगमन संयन्त्र बनेको देखिन्न भने मेडिकल क्वासरन्टिनको परिमाण अपुग त छँदैछ त्यहाँको व्यवस्थापन पनि फितलो देखिएको छ । त्यस्तो फितलो नदेखिएको भए जो जहाँ छन् त्यहीं व्यवस्थापन हुन्थ्यो तर त्यसो नभई दिनहँफ सयौंको संख्यामा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूको जमात आफ्नो स्थायी ठेगानातिर पैदल हिँडेका देखिन्छन् । साथै राहतको अवस्था झन लाजमर्दो छ । कमसल सामग्री वितरण त छँदैछ, राहत पाउनेहरूको घर-घरमा सीमित व्यक्तिहरूले राहत बाँड्नु पर्नेमा राहत लिनेहरूको लर्को त छँदैछ, दिनेहरूको फोटो सेसन नै चलेका छन् ।
सर्वहाराहरूको अग्रदस्ताको रूपमा कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ भनेर पढ्दै-सुन्दै-गुन्दै कम्युनिष्ट पार्टीमा किशोरावस्था र जवानी सुम्पिसकेको छु । तर अहिले यस कोरोना भाइरस रोगको चपेटमा प्रत्यक्ष रूपमा त जो-जो परेका छन् उहाँहरूमाथि त संकट छँदैछ, त्यसको दुष्प्रभावले सबैभन्दा बढी सर्वहाराहरू नै ग्रसित भइरहेका छन् । तर तीन तहका सरकारहरू अहिले अस्तित्वमा रहे पनि अधिकांश शक्तिशाली सरकारहरू कम्युनिष्ट छन् तर सर्वहाराहरूको सबैभन्दा बिचल्ली भएको छ ।
गैर कृषि क्षेत्र त धराशायी भएकै छ यस महामारीको चपेटामा परेर, यदि यो अवस्था लम्बिँदै गए कृषि प्रधान देशको कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा नराम्ररी चौपट हुने निश्चित छ । दुग्ध उत्पादक, कुखुरा उत्पादक, माछा उत्पादक किसानहरू त बिचल्लीमा परिसके, अन्न उत्पादक किसानहरू पनि राम्रो स्थितिमा छैनन् । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा पार्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । तर कुनै विशेष कृषि प्याकेजको अहिलेसम्म कुनै तहको कुनै सरकारले घोषणा गरेको छैन ।
जीऊ-ज्यानको सुरक्षाको कुरो जहाँसम्म छ, सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अलपत्र परेका लाखौं नेपालीको घर फर्कने अधिकारको पक्षमा सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि देशभित्रै रोजगार गुमाउनुको साथै अलपत्र परेकाहरूको पक्षमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर राज्यको पारा राणाशाहीभन्दा माथि उठेको देखिन्न । किनभने अहिले नै संघीय सरकारले धमाधम विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि गरिरहेको छ जुन अहिलेको प्राथमिकता होइन ।